news content | Ministry of Communications And Information Technology
This content requires Adobe Flash Player 8
0ffice of the Minister
Works & Inspections
Extension of deadline for an Expression of Interest regarding the tender for two Telecommunications Service Licences in the Republic of the Union of Myanmar REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
Telecommunication Operator Tender Evaluation and Selection Committee
Extension of deadline for an Expression of Interest regarding the tender for two
Telecommunications Service Licences in the Republic of the Union of Myanmar
The Selection Committee has decided to extend the deadline for the submission of an
Expression of Interest (EOI) regarding the awarding of two nationwide
telecommunications service licences by 10 working days.
Extension of deadline for an Expression of Interest regarding the tender for two Telecommunications Service Licences in the Republic of the Union of Myanmar Date: January 25, 2013
Interested parties are required to submit an Expression of Interest (EOI) no later than
3 PM, local time (Nay Pyi Taw, Republic of the Union of Myanmar), on February
8, 2013. Interested parties are required to submit the EOI to the Telecommunications
Operator Tender Evaluation and Selection Committee at
GSM နှင့် CDMA ဖုန်းလိုင်း လေးသိန်းကျော် ထပ်မံချထားပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပြီ GSM နှင့် CDMA ဖုန်းလိုင်း လေး သိန်းကျော် ထပ်မံချထား ပေးရန်စီ စဉ် နေကြောင်း သိရသည်။ ယခု ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မကုန်မီတွင် CDMA 450 ဖုန်း နှစ်သောင်း ကျော်ကို ထပ်မံ ချထား ပေးမည်ဟု သိရသည်။ မိမိနေ ထိုင်ရာ မြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေး ရုံးများ တွင် လျှောက် ထား ရကြောင်း၊ တာဝါတိုင် တည်ဆောက် ပြီးသည့် မြို့နယ် များတွင် တစ်မြို့နယ်လျှင် အလုံး ၅ဝဝ မှ ၁ဝဝဝ ကျော်ထိ ချပေး နိုင်ရန် စီစဉ် နေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေး ကျပ်(၅)သိန်းတန် CDMA 800 MHz ဖုန်းများ တစ်နိုင်ငံလုံးပြောနိုင်ပြီ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျပ်(၅)သိန်း ဖြင့် ငှားရမ်းခွင့် ချထားပေးခဲ့သော Wireless Auto Telephone CDMA 800 MHz တယ်လီဖုန်းများအား အောက်တိုဘာလ မှစ၍ နယ်မြေ ကန့်သတ် ချက် ကျော်လွန် သုံးစွဲခွင့်အား အဆိုပါ ဖုန်းများ တပ်ဆင် အသုံးပြုခွင့်ပြုခဲ့သော ရန်ကုန် ၊နေပြည်တော်၊ မန္တလေးမြို့များတွင် စတင် ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်နိုင်ငံလုံး သယ်ဆောင်အသုံးပြုခွင့် အား
ရွေ့လျားအင်တာနက်စနစ် ကနဦးတပ်ဆင်ကြေး ခုနှစ်သိန်းဖြင့် ရယူနိုင်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကိုယ်စားလှယ် ၃၃ဝ ထားရှိ ရွေ့လျား အင်တာနက် စနစ် Multi-play Service ကို ကနဦး တပ်ဆင်ကြေး ကျပ် ခုနှစ်သိန်း ဝန်းကျင်ဖြင့် ရယူ တပ်ဆင်နိုင် မည်ဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင် ရွက် ပေးမည့် Sky Net မှ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းဆွေက ပြောကြား သည်။ အင်တာနက်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့် ရုပ်သံ လိုင်းများ ပါဝင်သည့် ရွေ့လျား အင်တာနက် စနစ်ကို တပ်ဆင်လိုပါက ကနဦးတပ်ဆင်ကြေး လစဉ်ကြေးမှာ ရယူ မည့် Bandwidth ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်ကွာခြား ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ Bandwidth ပမာဏ 2MBps ဆိုပါက လစဉ်ကြေးတစ်လလျှင် FEC 150 ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး 1MBps ရယူမည်ဆိုပါက FEC 100 ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ 512 KBps ဆိုပါက FEC 30 သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ်မှ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ဇော်လွင်က ပြောကြာသည်။ Read more
Broadband သုံးစွဲသူအချို့ ADSL ပြောင်းလဲအသုံးပြု တယ်လီပို့မှ ယခင်က ချပေးခဲ့ဖူးသော Broadband WiMAX ဖြင့်အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများ မှာ ADSL သို့ပြောင်းလဲ အသုံးပြု မှုများ လာကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ “အရင်က ချပေးခဲ့တဲ့ Broadband WiMAX ကအသစ် ထပ်မချပေးတော့တာ ခြောက်လ ကျော် လောက်ရှိပါပြီ။ Broadband ကနေ ADSL ပြောင်းကြ တာမျိုး ရှိပြီး အဲဒီလိုပြောင်းတဲ့အတွက် ဝန်ဆောင်ကြေး ပေးရတာမျိုး မရှိ ပါဘူး။
ဖားကန်ဒေသရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းရုံများတွင် နေရောင်ခြည်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ် တပ်ဆင်မည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ရှိ စိမ့်မူနှင့် လုံးခင်းဒေသများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းရုံများတွင် နေရောင်ခြည်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စနစ်ကို စမ်းသပ် တပ်ဆင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုစနစ်ကို တာဝန်ယူတပ်ဆင်မည့် Solar Hut ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောကြား သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စနစ်သည် နေရောင်ခြည်ခံပြား၊ ဘက်ထရီအိုး၊ နေရောင်ခြည်ထိန်းညှိ ကိရိယာ၊ အင်ဗာတာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာစသည်တို့ကို အသုံးပြု၍နေမှ ရရှိသည့်နေစွမ်းအင်ကို Solar ပြားဖြင့်ရယူပြီး လျှပ်စစ်မီး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် စွမ်းအင်လွှဲပြောင်း ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။
ကျပ်ငါးသိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း နေပြည်တော်တွင် ချထားပေးမည် မဟုတ် ဟုတာဝန်ရှိသူပြော မန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း အနေဖြင့် ကျပ်တစ်ဆယ့် ငါးသိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများအား ကျပ်ငါးသိန်းဖြင့် နေပြည် တော်ခရိုင် အတွင်း တွင် ချထား ပေးမည် ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ် မှန်ကြောင်း နေပြည် တော် ရှိယင်း လုပ်ငန်းဌာန၏ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဌာနမှ တာဝန် ရှိသူက ငြင်းဆို လိုက်သည်။
မြန်မာ-ထိုင်း အင်တာနက် ဆက်ကြောင်းအား တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယသို့ ပြောင်းလဲချိတ်ဆက် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အင်တာ နက်ဆက်ကြောင်းအား တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ များ ဘက်သို့ လွှဲပြောင်း ချိတ်ဆက် ထားကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ မြန်မာ-ထိုင်းကုန်းတွင်း နယ် စပ်ဖြတ်ကျော် အင်တာနက် ဆက်ကြောင်းအား ယခုကဲ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက်သို့ လွှဲပြောင်း ချိတ်ဆက်ထားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော China Telecom နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းနည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် Ta Ta ကုမ္ပဏီတို့နှင့်
S M T W T F S 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PTD
၁။ ၁၉၆၀ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက စာတိုက်ဌာနနှင့်ကြေးနန်းဌာနဟူ၍ ဌာန(၂)ခုခွဲပြီး သီးခြားစီ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ(၂၅) ရက်နေ့မှစပြီး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဌာနအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၂ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေမှစ၍ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း
(ယခုမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း) ဟူ၍အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။ Read More
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း သည် နိုင်ငံတော် ၏ လုပ်ငန်း ၊ ဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပြည်သူများ ၏ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီမံခန်ခွဲရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အရေးပါ အရာ ရောက်လှသော ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် စာတိုက်လုပ်ငန်း၊ ကြေးနန်းလုပ်ငန်း နှင့် တယ်လီဖုန်းလုပ်ငန်း များကို ပြည်သူ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဌာနကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Read More Phone Directory
Ministry of Foreign AffairsMinistry Of Religious AffairsMinistry of CommerceMinistry of ConstructionMinistry of Livestock-FisheriesMinistry of Co-OperativesMinistry of Hotels and TourismMinistry of Home AffairsProgress of order Areas and National Races and Development AffairsMinistry of EducationMinistry of HealthMinistry of CultureMyanma Posts and TelecommunicationsMyinistry of Communiction and Information TechnologyMinistry of Finance and RevenueMinistry of ForestryMinistry of Immigration & PopulationMinistry of Industry (1)Ministry of Industry (2)Ministry of TransportMinistry of Information CommitteeSocial Welfare, Relife and Resettlement
Hit Counter: Online Service
* EMS * Telephone Dir * E Telegram Office Of The Minister * About
PTD * About PTD
* Laws and Regulations
* Application Forms
* PTD News
* About MPT
* MPT News
Building No.2, Special Development Zone, Nay Pyi Taw, Myanmar Ph: (+9567)407225 | Fax: (+9567) 407216 | e-mail: dg.ptd@mptmail.net.mm
Copyright © 2011 Ministry of Communications, Posts and Telegraphs. All rights reserved.